Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Liiska Faylka Fudud
Element Engage, LLC - Qoraa iyo iibiyaha Liistada Faylka Fudud. Qalabka WordPress.
Websaydhada lagu dabaqi karo siyaasaddan waa:
Xogta shaqsiyadeed ee aan ururiyo iyo sababta aan u urursho
Faylasha dhijitaalka ah
Dabeecada websaydhkani waa inay iibiso arjiga wadaagista faylka. Inta lagu guda jiro howsha qiimeynta sheygan, waad soo gudbin kartaa hal ama in ka badan feylal dijitaal ah si aad khibrad ugu hesho howsha. Faylashaan, iyo wixii xog ah ee laxiriirta ee laxiriira, waxay noqdeen hantida Element Engage, LLC waxaana loo isticmaali karaa qayb kamid ah degelkan dadka kale inay daawadaan, soo dejiyaan, wax ka beddelaan, dhaqaaqaan ama tirtiraan.
Waxaad codsan kartaa in feyl la soo galiyay la tirtiro la xiriirida taageerada.
Marka booqdayaashu ay ka tagaan faallooyinka bogga aan soo uruurino xogta ku qoran foomka faallooyinka, iyo sidoo kale cinwaanka IP booqdaha iyo wakiilka isticmaalaha browser si ay u caawiyaan spam ogaanshaha.
Qodob aan la aqoonsan oo laga sameeyay cinwaanka emailkaaga (oo loo yaqaan magac) ayaa laga yaabaa in lagu siiyo adeegga Gravatar si loo eego haddii aad isticmaalayso. Nidaamka gaarka ah ee adeegga Gravatar wuxuu halkan ka heli karaa: https://automattic.com/privacy/. Kadib ansixinta faalladaada, sawirkaaga muuqaalkuna waa muuqan yahay dadweynaha marka la eego aragtidaada.
Haddii aad sawirrada ku dhejiso bogga internetka, waa inaad ka fogaataa inaad ku dhejiso sawirrada xogta meesha ku jirta (GPS) oo lagu daray. Dadka booqanaya bogga internetka waxay soo dejin karaan oo soo saari karaan xogta goobaha laga soo galo bogagga.
Haddii aad ka tagto faallo ku saabsan boggayaga, waxaad dooran kartaa inaad ku badbaadiso magacaaga, cinwaanka emailkaaga iyo bogga cookies. Kuwani waxay u yihiin fududaantaada si aanad u buuxin faahfaahintaada mar kale markaad ka tagto faallo kale. Kukiyadaas waxay sii socon doonaan hal sano.
Haddii aad leedahay xisaab oo aad gasho boggan, waxaanu samayn doonaa qadar ku meel gaar ah si loo ogaado haddii fa'iidadaada ay aqbasho koobiyaal. Dukumiintani kuma jirto xog shakhsi ah waana la tuuraa markaad xireyso galkaaga.
Markaad soo gasho, waxaanu sidoo kale samayn doonaa dhowr cookies si loo keydiyo macluumaadka login iyo shaashadahaaga muujinaya doorashooyinka. Kukiyada galitaanka waxay socotaa laba maalmood, iyo shaashadaha kala duwan ee shaashadda waxay soconayaan hal sano. Haddii aad dooratid "Xusuusin", waxaad geleysaa laba toddobaad. Haddii aad xisaabtaada ka qorto, koontooyinka ku-soo-galka ayaa laga saari doonaa.
Haddii aad daabacdo ama daabacdo maqaal, cookie dheeraad ah ayaa lagu keydinayaa shabakadaada. Cookie-ka waxaa ku jira macluumaad shakhsi ah oo si fudud u muujineysa aqoonsiga post ee maqaalka aad kaliya edited. Waxay dhacaysaa ka dib maalinta 1.
Mawduucyada ku jira bogagga kale
Mawduucyada boggan waxaa laga yaabaa inay ku jiraan waxyaabo ku jira (sida fiidiyo, sawirro, maqaalo, iwm.). Mawduucyada ku jira mareegaha kale waxay u dhaqmaan si sax ah sida haddii booqdaha booqday bogga kale.
Website-yadu waxay kaa qaadi karaan xog ku saabsan adiga, isticmaal cookie-yada, ku-daba-galka raadinta saddexaad ee dheeraad ah, kormeer ku sameyso isdhexgalkaaga, kuwaas oo ay ka mid yihiin la socoshada isdhexgalkaaga content content haddii aad haysato xisaab oo aad gashid boggaan.
Yaanu wadaagnaa xogtaada
Macluumaad kasta iyo dhammaan keydinta waxaa loogu talagalay ujeeddada kaliya ee taageerada macaamiisha iyo hubinta diiwaangelinta liisanka.
Muddo intee le'eg ayaan hayno xogtaada
Haddii aad ka tagto faallo, faallooyinka iyo maadooyinkooda ayaa si aan rasmi ahayn loo tirtiray. Tani waa si aan u aqoonsanno oo aan u ansixino wixii faahfaahin dheeri ah halkii ay ku hayn lahaayeen safka dhexdhexaadka ah.
Isticmaalayaasha isticmaala boggayaga internetka (haddii ay jiraan), waxaan sidoo kale ku kaydineynaa macluumaadka shakhsiyadeed ee ay ku bixiyaan asxaabtooda. Dhammaan dadka isticmaala waxay arki karaan, beddeli karaan, ama tirtiri karaan macluumaadka shakhsi ahaaneed wakhti kasta (marka laga reebo ma beddeli karaan magacooda magacooda). Maamulayaasha shabakada waxay sidoo kale arki karaan oo wax ka beddeli karaan macluumaadkaas.
Waa maxay xuquuqda aad ku leedahay macluumaadkaaga
Haddii aad koonto ku leedahay boggan, ama aad ka tagtay faallooyin, waxaad codsan kartaa inaad hesho faylka la dhoofiyay ee xogta shakhsiga ah ee aan kaa hayno adiga, oo ay ku jiraan macluumaadka aad na siisay. Waxa kale oo aad codsan kartaa in aan tirtirno macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aanu kaa hayno adiga. Tani kuma jirto wax macluumaad ah oo aan ku qasbanahay inaan ku hayno maamul, sharci, ama ujeedooyin amni.
Halka aan dirno xogtaada
Faallooyinka booqdaha waxaa laga yaabaa in lagu hubiyo adeegga xariifinta spam automat.
Qaybta Hawlgalka, LLC